Shikhar Samachar | घरमै 'सेल्फ क्वारेन्टाइनमा' कसरी बस्ने? घरमै 'सेल्फ क्वारेन्टाइनमा' कसरी बस्ने?
‘सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन’ गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेसमेत उनले बताए।
‘सार्वजनिक स्थानमा नजाने, धेरै मान्छे एक ठाउँमा भेला नहुने भनेर सरकारले पनि निर्देशन दिइसकेको छ। त्यसैले अत्यावश्यक काम छैन भने घरबाट बाहिर निसक्नु हुँदैन, ‘ उनले भने,’सकेसम्म सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग गर्नु हुँदैन। प्रयोग गर्न परे पनि भीडभाड नभएको बसमा यात्रा गर्नुपर्छ।’
‘यो रोग अस्पतालबाटै धेरै फैलिएको छ। यदि अत्यावश्यक छैन भने तपाईं अस्पताल नजानुस्,’ उनले भने,’सामान्य समस्याका लागि अस्पताल जान जरूरी छैन। यदि बिरामी छ भने एक जनामात्रै कुरूवा बसिदिनुस्। जसले गर्दा कोभिड -१९ को तयारी गर्न पाइयोस्।’
कोरोना रोकथामका लागि ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ उपयुक्त हुने भए पनि सबैले यस्तो गर्न सम्भव नरेहको उनले बताए।
‘हाम्रो सामाजिक बनावट हेर्दा सेल्फ क्वारेन्टाइन कठिन छ। कम्तिमा १ मिटरको डिस्टेन्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ,’ उनले भने,’हाच्छिउँ र खोक्दा नाकमुख छोप्नुपर्छ। जथाभाबी अनुहार छुनु हुँदैन।’